I-Eco-friendly twill 50% Polyester 50% bamboo indwangu abakhiqizi nabaphakeli | I-Yun Ai
Eco-friendly twill 50% Polyester 50% bamboo indwangu
Ulapha: ekhaya - Imikhiqizo - Eco-friendly twill 50% Polyester 50% bamboo indwangu
Indwangu yoqalo indwangu yemvelo eyenziwe ngoginindela wotshani woqalo. Indwangu yoqalo ibilokhu ikhula ekuthandeni ngoba inezinto eziningi ezihlukile futhi iyasimama kunemicu eminingi yendwangu. Indwangu yoqalo ilula futhi iqinile, inezindawo zokukhotha ezinhle kakhulu, futhi ngezinga elithile ilwa namagciwane. Ukusetshenziswa kwe-bamboo fiber yezingubo kwakungukuthuthuka kwekhulu lama-20, okwaphayona ngezinhlangano eziningana zaseChina.
Ukwakheka: U-50% bamboo, i-polyester engu-50%
Into Cha: BT2101
Ubuningi: 152 * 90
Ububanzi: 57 `` / 58 ''
Imbobo: IShanghai noma iNingbo
Imvelaphi yefayibha yoqalo
Uhlaka lwe-bamboo luhlobo lwentambo evuselelwe ye-cellulose eyenziwe ngeminyaka engu-3-4 yoqalo oluhlaza oluqinile futhi oluqondile oluluhlaza njengokuluhlaza, okuphekwe ku-bamboo pulp ekushiseni okuphezulu, kukhishwe i-cellulose, bese kukhiqizwa ngokwenza izinhlaka nokwenza izinqubo zokuphotha
Izici zendwangu yensimbi yoqalo
Inani elifanayo lamagciwane abonwa ngaphansi kwesibonakhulu lingaphindaphindeka kwimikhiqizo kakotini nokhuni, kanti amabhaktheriya emikhiqizo ye-bamboo fiber abulawa cishe ngama-75% ngemuva kwamahora angama-24.
Umsebenzi we-adsorption onamakha, i-bamboo fiber yangaphakathi ekhethekile ye-ultra-fine pore structure yenza ukuthi ibe namandla okukhangisa ngamandla, ingakwazi ukumunca i-formaldehyde, i-benzene, i-toluene, i-ammonia nezinye izinto eziyingozi emoyeni, iqede iphunga elibi.
Umsebenzi wokumunca umswakama nokukhishwa komswakama, ingxenye yesiphambano se-bamboo fiber i-concave ne-convex deformation, igcwele cishe ama-pores ama-elliptic, ingumgogodla omkhulu, inamandla we-capillary, ingamunca futhi ihwamuke amanzi khona manjalo
Ukumelana okuqinile kwe-UV okuqinile, isilinganiso sokungena kukotini UV singama-25%, uqalo lwe-bamboo fiber uv lokungena lungaphansi kuka-0.6%, ukumelana kwalo ne-UV kuyizikhathi ezingama-41.7 kunokotini.
Umsebenzi omkhulu wokunakekelwa kwezempilo, uqalo ucebile nge-pectin, uju woqalo, i-tyrosine, uvithamini E, i-SE, i-GE kanye nezinye izinto ezilwa nomdlavuza nezokulwa nokuguga.
Umsebenzi onethezekile futhi omuhle, u-bamboo fiber unit ubucayi, ubumhlophe obuhle, umbala wokudaya ubuhle, obukhanyayo nobuyiqiniso, akulula ukufiphala, ubukhazikhazi obukhanyayo, ukhuluphele nokukhuhla, ubuhle nenhle, i-drape enhle, enokuthungwa kwemvelo okulula nokuhle.
Ithambile futhi ikhululekile
Kufudumele ebusika futhi kupholile ehlobo
Elwa namagciwane elwa namagciwane